allsanaag.com - Culusoow oo mar kale ka baaqday Kenya
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3207	Days	08	Hours	10	Minutes	20	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Culusoow oo mar kale ka baaqday Kenya
Written by khalid	Madaxwaynaha Soomaaliya oo Markale ka Baaqday Booqashadda Kenya- Maxay tahay Sababtu?
Illo Lagu Kalsoon yahay ayaa Warbaahinta Ogadentoday Press u sheegay In Madaxwaynaha Soomaaliya Muddane Xassan Sheekh Maxamud uu doonayay Inuu ka qayb gallo, Sannad-Guuradda 49aad ee Xoriyadda Dalka Kenya oo ku beegnayd Maanta oo laga dabaal Deggayay Kenya. Illo-Xog ogaal ah ayaa sheegaya In Madaxwaynaha Soomaaliya uu ka baaqday Kaddib Markii Dowladda Kenya ku wargalisay in uusan hadda iman Dalka isla Markaasna dib ooga wadda Hadli Doonaan xaaladda Siyaasadeed ee uu abuuray. Maxay tahay Sababtu? Booqashadda Madaxwaynaha Soomaaliya Muddane Xassan Sheekh Maxamud uu ku tagay Dalka Itoobiya Bishii la soo dhaafay ayaa noqotay mid dhalisay murran xoogaan oo Siyaasadeed oo soo kala dhex galla Dalalka IGAD oo Madaxwaynaha Soomaaliya uu ku dacweeyay Dowladda Kenya. Madaxwaynaha Soomaaliya markuu ka soo laabtay Itoobiya oo Dowladda Itoobiya la noqotay isku fikir Dowladda Kenya ayuu warqad qoraal ah oo uu ku dacwaynayo Kenya u gudbiyay Qaramadda Midoobey. Safiirka Dowladda Kenya u joogaa Qaramadda Midoobey ayaa helay xogta Warqadda Madaxwaynaha uu ku eedeyay Kenya isagoo Dowladdiisa Kenya wax ka waydiiyay arrimahan. Dowladda Kenya ayaa si xooggan ooga cadhootay Qoraalka uu Madaxwaynaha Soomaaliya ku dacweeyay Kenya Iyo Siyaasiyiin gaar ah oo ka soo Jeeda Gobaladda Jubooyinka. Qorshuhu wuxuu ahaa in Madaxwaynaha Kenya Iyo Soomaaliya ay ka wadda hadlaan isla markaasna gaaraan is af-garad balse Kenya ayaa hadda u aragta In Muddane Xassan Sheekh uu doonaya Shirqool inuu u abuuro Kenya midaas hadda fashilantay. Sababta Baajinaysa Booqashadda mar walba ayaa ah ah midaas isla markaasna Dowladda Kenya ayaa doonaysa in Madaxwaynaha Soomaaliya ay ka wadda hadlaan wakhti haboon sababta uu qoraal Dacwad ah ooga qoray Kenya oo uu u daba maray Balanta isku ogaayeen. Siyaasiyiinta Soomaaliya ee u dhow Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa dhowr mar ku cel celiyay In Kenya beello gooni ah Taageerayso Midaas oo lagu tuhunsan yahay la taliyaal gaar ah oo Madaxwayne Xassan Sheekh u dhow inay ka danbeeyan Qorshahan Beello gaar ah lagu weerayayo. Booqashadda Madaxwaynaha uu ku tagay Gobalka Hiiraan, ayaa noqotay midda dhalisay, Qaraxa Siyaasadeed ee dhex yaalla Madaxwaynaha Iyo Dadka Deegaanka Jubooyinka, Madaxwaynaha ayaa sheegay in Dadka Reer Baladwayne dhistaan Maamul isagoo Carabka ku dhuftay wiil ina hebal oo hebal ah oo taqaanaan Doorta, Dhanka Kallana sheegay in Kismaayo uu maamul u soo samayn. Haddalka Madaxwaynaha waxaa loo arkay inuu yahay, "Impartial Judgement" xukun aan caddaalad ahayn. Hase ahaatee Madaxwaynaha oo u waramayay TV Qaranka ayaa sheegay in arrinta Jubooyinka si qaldan loo fasiray. Xeeldheerayaasha arrimaha Siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in hadda Madaxwaynuhu uu ka soo dabcay Heerkii uu horey ooga taagnaa Arrimaha Maamul u samaynta Gobaladda Jubooyinka midaas oo ku soo aadaysa War-Murtiyeedka IGAD ay soo saartay oo qeexaya in Dowladaha Ku bahoobay IGAD ee Soomaaliya, Kenya, Itoobiya Iyo Jabuuti isku afgarteen habka Maamulka Loo dhisi. < Prev